Kpọọ Anyị Taa!
Exlọ ọrụ Ngosi
valvụ engine maka engine America
engine engine maka Cummins
Ngwunye engine maka Caterpillar
valvụ engine maka john deere
Injin engine maka Detroit
engine engine maka engine engine nke Germany
Injin engine maka Mercedes Benz
Gịnị bụ ihe na-akpata ntụtụ igwe ọkụ?
Gịnị bụ mkpọtụ valvụ? Mgbe ụgbọala ahụ malitesịrị, njin ahụ na-eme “pịa” nke yiri ụda yiri mgbaaka ígwè, nke na-eme n’ike n’iru ka ọsọ injin ahụ na-amụba. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, injin ahụ agaghị eme ụdị mkpọtụ a ogologo oge. Ọtụtụ n'ime ...
Kedu uru nke sistemụ oge gbanwere agbanwe?
Kemgbe igwe ahụ batara, ndị mmadụ akwụsịbeghị imeziwanye ya, anyị ahụkwala ọgbọ nke injin ọhụrụ ndị nwere nchupu dị iche iche site na nke ukwu na nke obere. Site na mmụba nke ụgbọ ala, anyị webatara ọgba aghara ike dị egwu. , Mmanụ, ihe na-enweghị mmeghari ohuru, jiri nwayọ ...
Etu esi emeso ọdịda Valve?
Mgbe ọgbatumtum na-agba ịnyịnya ruo ogologo oge, nhichapụ valvụ ahụ ga-apụta n'ozuzu, oke buru ibu ma ọ bụ obere obere, iji chọta ihe kpatara ya, ịkwesịrị ịjụ ọtụtụ ozi, onye na-eweta ngwongwo moto iji nye gị nyocha dị mfe. Mmetụta nke ndị ogbenye valvụ nwechapụ na engine La ...
Etu esi ekpochapụ ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala?
Akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa na-arụ ọrụ gburugburu ebe obibi siri ike, kọntaktị kpọmkwem na gas, oke ọkụ nke valvụ ọkụ nwere ike iru 800 ℃, yana na ngwụcha nke usoro mmanu ahụ, yana ọrụ valvụ ahụ mgbe mmeghe na mmechi ahụ na-agakarị, akụkụ valvụ ahụ dị nnọọ mfe ...
Olee otú Gbanwee ọgba tum tum engine valvụ nwechapụ?
Mgbe ọgba tum tum na-agba ịnyịnya ruo ogologo oge, injin ahụ n'ozuzu ya ga-enwe nhichapu valvụ nke buru oke ibu ma ọ bụ pere mpe, oke ma ọ bụ obere, nnukwu ma ọ bụ obere. Ọtụtụ ndị maara ọtụtụ ihe gbasara valves nwere ike ha agaghị ama ihe nsogbu ndị a nwere ike ibute, na informa ...
Obodo Wuji, Shijiazhuang City, Mpaghara Hebei, China
valvụ engine maka igwe japan
valvụ engine maka engine Korea
Jenụwarị-28-2021 Gịnị bụ ihe na-akpata ntụtụ igwe ọkụ?
Jenụwarị-28-2021 Kedu uru nke sistemụ oge gbanwere agbanwe?
Jenụwarị-28-2021 Etu esi emeso ọdịda Valve?
Jenụwarị-28-2021 Etu esi ekpochapụ ihe eji arụ ọrụ ụgbọ ala?